Zingaphi ixabiso loshishino lokuhlamba
Kufuneka ukuvula abacoceli abomileyo akuyona nje imali, baninzi kufuneka bakhethe imveliso yokucoca iqondo eliphezulu. Ukucoca ngokucoca i-franchise brand brand dry dry uphuhliso olukhawulezayo, ukukhula, imarike zininzi iintlobo ezahlukeneyo zokucoca izixhobo zokusebenza, iintlobo ezahlukeneyo zokusetyenziswa kwemishini yokuhlamba imveliso. Izixhobo zombane wokuhlamba, ngoko ke, malini na?
Uninzi lwento yokucoceka elomileyo kwiimarike, kodwa ukugqithiswa kwamanani ambalwa. Amancinci ayenyusa ukuba, I-ENEJEAN iqela lokuhlamba lezinto zokucoca ezinomileyo lilungile. Ukujoyina umgaqo-nkqubo we-ENEJEAN uphelele kakhulu, utyalo-mali olunjalo lunokunciphisa uxinzelelo oluninzi, kuba abatyali-mali ukuba bamise ucoceko kumgangatho wokukhuphisana kuya kuba namandla.
Ngokweenkqubo ezahlukeneyo ze-ENEJEAN yeqela lokuhlamba, ngokubanzi ngokubanzi ukucoca ukutshalwa kwezinto kwizixhobo ezingamakhulu amathathu lee yuan ngasentla, izixhobo eziza kulawulwa ngo-150000 i-yuan zamanzi ahlambulukileyo aphezulu, izixhobo ezincinci kwi-40000 yuan okanye bacebisi. Izixhobo ezikhethekileyo zokudibanisa, ngokuqinisekileyo, zinokubakho ngokubhekiselele kwisimo saloo mali-mali.
I-ENEJEAN iqela lokuhlamba elisebenza ngokucoca litshini liza kuba neenjineli zezobugcisa zenkampani ukufakela ukukhululeka, ukuguqula izixhobo, kunye ne-management guide. Inkonzo yokulawulwa komsebenzi omnye, maye onke ama-franchisees avule ivenkile engenakukhathazeka. Indleko encinci yinyaniso yethu enkulu, samkele abantu abaninzi bee-franchisees ukuphanda nokufunda!
Ngaphezulu ikwazisa nje ixabiso lemveliso yamashishini wokuhlamba, njengoluhlu oluthile lwemveliso yamashishini okuhlamba, abatyali-mali bangene ngemvume kwi-web site esemthethweni ye-EEJEJE yokuhlamba, bathambekele ekubeni neenkcukacha zoluhlu lwamashishini okuhlamba. Ngenxa yokuba ibhendi eyaziwayo, ixabiso layo lixhaphake ngokuthengisa kwiimarike, abatyali-mali bangabonakalisa.
Inqaku lokugqibela: Uhlalutyo lokujonga utshalomal...
Inqaku elilandelayo: Indlela yokugcina izinto zokus...